Kalaza NBA Taloha Mpandala Ny Tontolo Iainana Mitsidika An’i Kenya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2012 11:31 GMT
Hatramin'ny nisotroany ronono tamin'ny National Basketball Association [Etazonia] herintaona lasa izay, Lasa mpikatroka miaro ny tontolo iainana ilay kalaza Shinoa Yao Ming. Miasa miaraka amin'ny WildAid izy amin'izao fotoana izao “ho fampiroboroboana ny fitehirizana ny fiainan-dia sy fampihenana ny filana vokatra avy amin'ny karazam-biby ahiana na atahorana ho lany taranaka”. Tsenam-barotra manana ny anjara toerany amin'ny vokatra tahaka ny ny ivoara (vazana elefanta) i Shina ka mety tsara amin'ny WildAid ny itarihan'i Yao Ming ity fiarovana ity; mitody any Shina manko ny antsasany mihoatra amin'ny fanondranana ivoara an-tsokosoko.
Nanomboka tamin'ny 11 Aogositra 2012, no tonga tao an-drenivohitra kenyana ao Nairobi i Ming hanatontosa ny fitetezam-paritra Afrikana voalohany — Nairobi moa no iray amin'ny tanàna vitsy dia vitsy eto an-tany ahitana valan-javaboarim-pirenena. Ny Nairobi National Park no mitana ny foiben'ny sampan-draharaha fikarakarana ny Fiainan-dia [Fiainan-javaboary] ao Kenya, izay mpiambina ny valan-javaboarim-pirenena sy ny ankamaroan'ny toerana arovana ao amin'ny firenena.
Nahita mivanana elefanta nohazaina tsy ara-dalàna tao avaratr'i Kenya i Yao Ming. Sarin'i Kristian Schmidt avy amin'ny takelaka facebook WildAid.
Ho valin'ny famangiana, niteny ny DailyKenya blog:
Eto Kenya amin'ny maha-ambasadaoron'ny WildAid azy ny mpilalao NBA taloha Yao Ming, hanaitra amin'ny fisian'ny fihazana tsy manara-dalàna mandravarava ny tokatandroka (rhinoceros) sy ny elefanta. Antenaina haka sary antonta-kevitra entina hanoherana ny fihazana tsy manara-dalàna ao amin'ny firenena ihany koa i Yao. Tamin'ny Asabotsy ity kalazan'i Houston Rockets teo aloha ity no nitsidika ny toeram-pitehirizan-javaboarin'ny Ol Pejeta ao Nanyuki. Ampiasaina ho toerana masin'ny tokantandroka tavaratra fotsy efatra amin'ny fito sisa tavela manerantany ary na dia nohatevenina aza ny fiarovana ity valan-javaboary ity dia mbola nisy namono tamin'ny alalan'ny fihazana ihany ny tokatandroka 5 amin'ny 88 misy ao aminy. Antenaina hampiseho ny hatsaran-tarehy sy ny maha-zavadehibe ny fiainan-dia ary ny fiitatry ny krizin'ny fihazana tsy ara-dalàna ny tahirin-kevitra mitondra ny lohateny hoe “Ny Fahataperan'ny (fiainan-)Dia”
Ao amin'ny bolongan'ny diany nitety an'i Afrika, YaoMingBlog, no nakan'i Yao Ming tenany mihitsy ny sarin'ny ampahan-dalana tsirairay amin'ny fitetezam-paritra Afrikana ataony amin'ireo sary mahafinaritra mba hitantarany ny tantara aoriana kely:
Avy eo aho tafahoana tamin'i Najin sy Suni, roa amin'ny tokatandroka tavaratra fotsy fito sisa tavela manerantany – misolotena ny karazam-biby iray tena tandindonin-doza indrindra eto amin'ny planeta. Nivezivezy an'i Kôngô, Ongandà ary Sodana ny Tokatandroka tavaratra fotsy taloha saingy fito sisa tavela, ka ny efatra amin'ireo no hita ao Ol Pejeta. Nafindra monina avy any amin'ny toeram-pampirantiana biby tao amin'ny Repoblika Tsheky ho ao Ol Pejeta ireo Tokatandroka Fotsy Tavaratra efatra ireo tamin'ny Desambra 2009 mba ho fara-fanavotana ity karazam-biby ity. Ringana tanteraka izy ireo raha eny an-kahalalahana, noho ny fihazana tsy manara-dalàna vokatry ny fitadiavana tandroka tokatandroka amin'ny fitsaboana nenti-paharazana aziatika. Ny tanjon'ny famindra-toerana moa dia ny ahafahan'ny tokatandroka mahazo toerana mora hananany taranaka indrindra mba hisintonana ny karazany ho tafala amin'ny faratampon'ny faharinganana. Ny toetr'andro, ny sakafo sy ny fiarovana azy ireo no mety ankafizan'ny tokatandroka (rhinos) an'i Ol Pejeta ka mety isian'ny herijika hananganany mponina amin'ireo sisa miangan'ny karazam-biby farany
Manamarika ny fitsidihan'i Yao Ming avy amin'ny fomba fijerin'ny ao an-toerana i Nanyuki and the North blog ao amin'ny lahatsoratra fohy:
1. Mitombo ny fanatrehan'i Shina eto Afrika - Ol Pejeta, ilay toera-pitehirizana akaiky dia akaiky an'i Nanyuki, dia nisy mpitsidika goavana (hitanao izay lazaiko? Tsia? Ho fantatrao) tamin'ny faran'ny herinandro teo. Raha ny marina, sorena mihitsy aho tsy nahare momba azy ity raha tsy efa lasa ilay zava-nitranga. Toe hoe eo am-pikarakarana rafitra enti-manohitra ny fihazana tsy ara-dalàna i Ol Pejeta. Moa tsy efa tsara, sa ahoana? Izany hoe heverina ho tsara hany ka ho fanohanana ny fandraisana an-tanana nataon'izy ireo, dia notsidihana olona tsy iza fa i YAO MING. Tsy voafehy. Nandalo 10 maily niala ny tranoko eto amin'ny Lembalemban'i Rift eto Kenya i Yao tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo.